Ndị na-emepụta ngwaahịa na ndị na-ebubata China zuru oke | MG
MG Automatic Dry Mortar Production Line nakweere echiche imewe nke Europe na sistemụ njikwa akpaaka kachasị ọhụrụ. E tinyela nhazi ụlọ elu n'ozuzu ya yana ọrụ enyi mmadụ nwere ọkwa akpaaka ka emelitere nke ukwuu. Ikike nwere ike iru 30,000-100,000 tọn kwa afọ dịka nhazi dị iche iche.
Aha ngwaahịa: Akpaaka ahịrị mmepụta ngwa agha akọrọ
Ụdị moto: China ama ama akara CE Asambodo moto
Ụlọ ọrụ chọrọ: 800-1200m2
Mpaghara igwe: 80-120 m2
Mgbakọta ntụ ntụ: 80-150KW
Ogologo igwe: N'ime ogbako elu 10m, Silo n'èzí ogbako dị elu banyere 15m
Uru: Ụlọ ọrụ ozugbo, ọnụ ahịa dị mma, nkwa nke Quulity
Usoro na teknụzụ: Nye
Igwe mkpuchi pallet na palletizer robot: Enwere ike ịnye dịka ihe ndị ahịa chọrọ
The dum akọrọ ngwa agha ahịrị mmepụta nwere ọhụrụ imewe, ike ike nke ọrụ, mara mma okirikiri nhọrọ ukwuu, mma na akpaka njikwa usoro, na ala na nwere ọgụgụ isi njikwa usoro PLC. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka itinye ego na azụmaahịa.
MG ọhụrụ emebere Automatic Premixed Production Line nwere ihe nrụpụta kwa afọ nke tọn 300,000 bụ nke mejupụtara sistemu ihicha aja, sistemu ngwakọta ngwa agha agwakọta na sistemụ nnukwu.
The zuru ezu mmepụta ahịrị na-agụnye ájá ihicha usoro:
Usoro nchekwa ihe
Sistemụ batching akpaaka
Usoro ngwakọta nke ọma
Usoro mbufe ihe
Okpokoro okpokolo agba
6000L igwekota osisi
10000L igwekota osisi
Igwe elu igwe
Achọrọ onye ọrụ
Akpa eriri akpa
Igwe mkpuchi pallet
Dị ka achọrọ
MG akpaka akọrọ ngwa agha mmepụta akara
The eriri nwere ike ịbụ ikewapụ ngwa ngwa site na elu na-agbagharị agụba.
Nke a zuru akpaka akọrọ ngwa agha osisi na-akwadebe 60T ma ọ bụ 100T akụrụngwa nchekwa silo, ọ nwere ike na-echekwa akụrụngwa maka otu ụbọchị iji. Gbaa mbọ hụ na igwe na-aga n'ihu na-arụ ọrụ.
A na-ahapụ ihe ndị ahụ site na ọnụ ụzọ pneumatic, nke nwere ike ibelata ebe ndị kpuru ìsì n'ime igwekota, na-eme ka usoro mgbapụta ahụ dị ọcha na ngwa ngwa.
Nke ọsọ nke ịgwakọta dị ngwa ngwa, ọ na-ewe naanị 3-5 nkeji iji gwakọta ngwa agha akọrọ nkịtị.
Igwe nkwakọ ngwaahịa anyị nwere ike ịkwado sistemu akpaaka akpaaka dịka ihe ndị ahịa chọrọ. Nke ahụ nwere ike ime ka akpa na-ebugharị akpaaka mgbe akpa ahụ juru. Nakwa anyị nwere igwe mkpuchi pallet na palletizer robot ma ọ bụrụ na onye ahịa chọrọ.
Na ngwụcha ngwaahịa hopper, anyị na-akwadebe Ribbons, nke nwere ike ijide n'aka na ị na-agwakọta ihe nke abụọ, jide n'aka na agwakọta ihe n'otu n'otu ma ghara igbochi mgbe igwe nkwakọ ngwaahịa na-arụ ọrụ.
The akọrọ ngwa agha osisi kwadebe Intelligent PLC akara kabinet, ọ nwere ike na-echekwa 10 formulas, ahịa nwere ike họrọ usoro tupu mmepụta, mmepụta ga-akpaghị aka.
Tọn 500,000 nke ebe a na-agwakọta ngwa agha agwakọta akọrọ
Nke ngwaahịa ụlọ ọrụ ejirila ihe karịrị ụlọ ọrụ ihe owuwu 8,000 na China, wee bupụ ya na Canada, Russia, South Korea, United Arab Emirates, South Africa, Nigeria na karịa mba na mpaghara 70, nke ọtụtụ ndị ọrụ nabatara!
ISO9001 International Quality Asambodo
Ngalaba asambodo CE nke European
Ndị otu Council Integrity Alliance
Ngwa nke MG Automatic Dry Mortar Production Line
A na-eji ngwa agha ngwakọta akọrọ akọrọ n'ọtụtụ ngwa dị iche iche na-ewu ụlọ. Ụfọdụ n'ime ngwa ndị a bụ ihe zuru ụwa ọnụ na ụfọdụ ndị ọzọ bụ kpọmkwem na mpaghara ma ọ bụ obodo ụfọdụ. Ngwakọta ngwa ngwa akọrọ akọrọ nwere ike mepụta ngwa agha akọrọ ndị a:
Ngwakọta ejikọta Ngwa ngwa masonry, mgbidi na tile nrapado, ngwa agha arịlịka wdg
Ngwa ngwa eji achọ mma Ihe nkedo ịchọ mma, putty mgbidi ime na mpụta, ngwa mma mma mara mma wdg
Ngwa agha nchebe Ngwa agha na-egbochi mmiri, ngwa agha na-egbochi corrosion, ngwa agha na-ebuli onwe ya, ngwa agha na-eguzogide ọgwụ, ngwa mkpuchi ọkụ, ngwa mkpuchi mkpuchi ụda, ngwa nrụzi, ngwa agha na-adịghị emebi emebi, ngwa agha mkpuchi wdg.
Igwe a nwere ike mepụta ngwa agha akọrọ ndị a:
Ngwa agha masonry
Ngwa ngwa nrapado tile
Ngwa ngwa mgbidi dị nro ma dị nro
Ngwa agha na-egbochi mmiri
Ngwa mkpuchi agba
Ndozi ngwa agha
Ngwa agha na-ebuli onwe ya
Ngwa ngwa plasta mgbidi
MG 30T/H zuru akpaka ahịrị mmepụta ngwa agha akọrọ na igwe nkụ nke etinyere na China Inner Mongolia
Nhazi nke MG zuru akpaka akọrọ ngwa agha mmepụta akara
Sistemụ nbudata nnukwu
Sistemụ dosing mgbakwunye
Ụlọ njikwa PLC
Sistemụ nkwakọ ngwaahịa
Ka anyị zute ka anyị mata onwe anyị.
Iji bụrụ ndị mmekọ azụmahịa na ndị enyi na ndụ, na-ejikọta aka iji mepụta echi ka mma.
1, Kedu maka itinye ego nke oru a?
A: Injinia anyị nwere ike chepụta akụrụngwa agwakọta ngwa agha akọrọ dị ka ihe achọrọ na mmefu ego gị, itinye ego ngwa ngwa dị iche iche na-agwakọta ngwa agha dị iche. Ikike dị ala dị ala, anyị ga-enye gị ngwọta dị ọnụ ala dị ka ihe achọrọ.
2, Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti zuru akpaka akọrọ ngwa agha Ịgwakọta akụrụngwa na Semi-akpaka akọrọ ngwa agha agwakọta akụrụngwa?
A: (1) Ngwakọta ngwa agha akọrọ nke ọkara akpaka dị ọnụ ala karịa ngwa agwakọta ngwa agha akọrọ zuru oke.
(2) Semi-akpaka akọrọ ngwa agha Ịgwakọta akụrụngwa adịghị mkpa iji kwadebe silos mgbe zuru akpaka akọrọ ngwa agha Ịgwakọta akụrụngwa kwadebe ihe silos.
(3) Semi-akpaaka akọrọ ngwa agha mixing akụrụngwa bụ ntuziaka nri na akpaka na-atụ na nkwakọ ngwaahịa, Full akpaka akọrọ ngwa agha mixing akụrụngwa bụ akpaka nri na akpaka na-atụ na nkwakọ.
3, Mmadụ ole ka achọrọ ka ọ rụọ ngwa ngwa ngwa ngwa akọrọ akọrọ?
A: Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ 2-4 zuru oke iji rụọ ngwa ngwa ngwa akọrọ akọrọ.
4, Kedu akụrụngwa na ọrụ ị nwere ike inye?
A: Anyị nwere ike na-enye gị turnkey ngwọta nke akọrọ ngwa agha mixing akụrụngwa si na-arụ ọrụ na-eme atụmatụ na akọrọ ngwa agha igwe, njem, echichi na ọzụzụ, usoro nke akọrọ ngwa agha, mgbe-sales ọrụ, ndụ oge oru nkwado et
Nke gara aga: 2021 China New Technology Full akpaaka akọrọ ngwa agha Line Production
Osote: 10-30T Ceramic Tile Adhesive Ime Machine Dry Mortar Mixing Equipment Mepụta Ngwa.
20-30T/H Akọrọ ngwa agha Ịgwakọta Osisi maka ire ere...
Mmepụta ngwa ngwa agwakọta dị elu nke ukwuu ...
Ngwaahịa ọhụrụ 2021 3-4T/H dị mfe ahịhịa akọrọ ...